José Mercé, Jerez nke nje dị ọcha | Njem zuru oke
Jose Soto Soto, nke a ma ama Jose Mercé (Aha nna ya nke nkà bụ ụtụ maka afọ ndị ọ na-abụ abụ na Basilica de la Merced, n'obodo ya), a mụrụ ya na Jerez de la Frontera na 1955, karịsịa na agbata obi Santiago. Nwa nwa nke Paco Luz na nwa nwanne nwoke Manuel Soto, ọ na-eku ume flamenco mgbe niile n'akụkụ anọ. Mgbe ọ dị naanị afọ iri na atọ, ọ gara Madrid, bụ ebe ọ malitere soro ndị na-agba egwu dịka Mario Maya, Carmen Mora na El Güito, mgbe nke a gasịrị, Antonio Gades sonyere na ndị na-agba egwu nke ọ gara Europe na ọtụtụ America. Mercé rụkọrọ ọrụ na Gades n'etiti 13 na 1973, na-esonye na fim "Bodas de sangre" na "Flamencos", nke Carlos Saura dere. Na 1987 o dere “Reed akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ"Na Tomatito na Enrique de Melchor, ndị ga-eso na 1987"Royal okporo ụzọ nke bụkuo”. Na 1991 o jiri onwe ya gosipụta “Mgbọrọgwụ miri emi", Na afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, na 1994, ọ bipụtara"Na-adọpụ mkpụrụ obi”. Otú ọ dị, ọ bụ na 1998 mgbe ọrụ nkà ya gbanwere oge dị mkpa, mgbe ọ na-edekọ album ahụ “Nke chi ọbụbọ”Onye na akpọ ụbọ akwara Vicente Amigo. Album ahụ nyere ihe osise ọhụrụ nke flamenco nke mejupụtara na 2000 na “Ikuku"Ndien ke ukperedem ye"Ọgbaghara"Na 2002, otu album nke Mercé n'onwe ya na-akọwa dị ka" ọba egwu ejiri obi "mee, nke ọ nwere mmekorita, n'etiti ndị ọzọ, nke Enrique de Melchor. Na nso nso a, na 2004, o gosipụtara “M tụkwasịrị Fuá obi”, Album nke o gosipụtara ngosipụta nke cantaor mastery site na ngwakọta nke egwu na cante kachasị dị adị.
Na nke mbụ ya na ogologo ọrụ ya, José Mercé na-ebipụta ọba egwu na egwu niile mere ka cantaor a mụrụ Jerez bụrụ onye kachasị ọnụ ọgụgụ na flamenco taa n'ihi ike ya iru ndị niile na-ege ntị na-efunahụ isi ya ma ọ bụ omimi ya. The album Onye Uwa Oma by José Mercé ewepụtara na Machị 26 ma nwee abụ iri na asaa nyere ya ohere ire ihe karịrị narị puku isii nke ihe ọba egwu ọhụrụ ya n’ime afọ iri gara aga. Abụ dị ka Ikuku, Primavera, Mgbe chi bọrọ, Aga m agba gị, M na-echeta gị Amanda, Ezumike, Nke chi ọbụbọ, Ọgbaghara, Mammy acha anụnụ anụnụThemes Mbụ na nsụgharị ndị na-ezute maka oge mbụ na Nnukwu ihe ịga nke ọma nke José Mercé, akụkọ banyere ihe kachasị njọ nke flamenco mepụtara n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụ na 1998 mgbe José Mercé dekọtara album mbụ ya na Virgin: Nke chi ọbụbọ. Emepụtara site na guitarist Vicente Amigo na abụ ndị dịka Primavera, José Mercé ruru ndị na-eto eto ntị na ọ bụghị onye ọkụ ọkụ, na-ere mkpụrụ 190.000 nke ọba egwu ahụ. Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ mebiri ndekọ nke ya na album na-esonụ, Ikuku, nke rere ihe karịrị 230.000 gụnyere nsụgharị nke Al alba, nke Luis Eduardo Aute. Ihe ịga nke ọma nke nsụgharị ha ga-emeghachi na ọba Ọgbaghara 2002 (José Mercé bụrụ abụ) M na-echeta gị Amanda nke Víctor Jara); na M tụkwasịrị obi si fuá site na 2004 (Clandestine by Manu Chao) na na Ihe na-enyeghi site na 2006 (Mammy acha anụnụ anụnụ nke Pop n'elu).
Egwu ndị a niile dị na ọba egwu Nnukwu ihe ịga nke ọma nke José Mercé, tinyere ndị ọzọ ewepụtara na ọba egwu ise ikpeazụ ya: Nke chi ọbụbọ, Primavera y O metụrụ gị n’ọkụ ma kpọọ gị ọkụ bụ nke album Nke chi ọbụbọ (1988); Mgbe chi bọrọ, Ikuku, Ndụ na-apụ y Jide ka disk Ikuku (2000); echetara m gị Amanda, Ọgbaghara y Filarmoney nke ógbè Santiago a Ọgbaghara (2002); Clandestine y M tụkwasịrị obi si fuá ka album M tụkwasịrị obi si fuá (2004) na Mammy acha anụnụ anụnụ y Aga m agba gị a Ihe na-enyeghi (2006). Tinyere ha, Oghere Dị mkpirikpi Ọ Na-anọghị, ntụrụndụ nke kpochapụwo nke Pablo Milanés gụnyere na ọba egwu Flemish n'ókèala, Eze na a Soleá site n'aka nri Ọ bụ akụkọ kachasị ọhụrụ na nke ọma banyere José Mercé, onye na-ese ihe site na kredul, ebe ọ bụ na a mụrụ ya na Jerez de la Frontera, na agbata obi Santiago, n'obi nke ezinụlọ Soto. O dekọtara album mbụ ya mgbe ọ bụ nwata. Mgbe e mesịrị ọ bụrụ abụ na ụlọ ọrụ nke Antonio Gades, abuana ke fim Agbamakwụkwọ nke Ọbara nke Carlos Saura, jikọrọ aka na National Ballet, meriri Córdoba National Flamenco Art Contest na 1986, kpọlitere ya na nka na 1998 ... Afọ ya kachasị mma ka a chịkọtara na Nnukwu ihe ịga nke ọma nke José Mercé, onye ọbụ abụ kacha mara amara otú ọ ga-esi kesaa flamenco ahụ maka mmadụ niile.
N'ihi ya, i nwere ike ịghọta na nkà nke José Mercé ebe a bụ obere vidiyo nke Ọgbaghara:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » José Mercé, Jerez nke nje dị ọcha